Inona no hatao aorian'ny fametrahana ny Fedora 21 !!! | Avy amin'ny Linux
Inona no hatao aorian'ny fametrahana ny Fedora 21
Salama namana avy amin'ny DesdeLinux, anio no itondrako anao ny tutorial aorian'ny fametrahana azy Fedora 21 miaraka amin'ny tontolo Gnome misy anao. Taloha toy ny mahazatra sary vitsivitsy:
Aiza no hahazoako an'i Fedora 21?
Ireo kinova hafa toa ny KDE, LXDE, XFCE na Mate dia azo sintonina avy eto:
Sintomy ny Fedora
Ankehitriny dia manokatra ny terminal izahay ary eo ambanin'ny faka dia manatanteraka:
wget http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-21.noarch.rpm && hametraka rpmfusion-free-release-21.noarch.rpm wget http://download1.rpmfusion.org /nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-21.noarch.rpm && hametraka rpmfusion-nonfree-release-21.noarch.rpm
Misintona ny fonosana amin'ny tranokala ofisialy ianao: http://get.adobe.com/cz/flashplayer/ misafidy ny kinova ho an'ny yum ary amin'ny tsindrio indroa dia napetraka ny fonosana alaina.
Fametrahana ireo fonosana be mpampiasa indrindra:
yum update && hametraka java-1.8.0-openjdk flash-plugin icedtea-web firefox thunderbird unrar zip unzip p7zip vlc libreoffice gimp wget mc htop gnome-tweak-tool filezilla system-config-firewall brazier
mametraha gstreamer gstreamer-plugins-tsara gstreamer-plugins-ratsy gstreamer-plugins-ratsy gstreamer-ffmpeg
Mametraka ilaina ilaina (tsy voatery):
yum groupinstall "Fitaovana Fampandrosoana" "Tranomboky Fampandrosoana"
Ary vonona. Efa vonona ny Fedora 21 ananany :).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Inona no hatao aorian'ny fametrahana ny Fedora 21
69 hevitra, avelao ny anao
Chapparral dia hoy izy:
Valiny tamin'i Chapparral
Misaotra anao @petercheco nizara, tsy nanome fotoana an'i Fryer efa ela aho, na dia angamba misy sasany izay tsy tia ny SystemD manao forkety ka mametraka an'i #Fuuuudora.
Andao hametraka virtoaly iray any ary ho hitantsika ny fandehany.
Hafahafa tokoa ny filazako fa mampiasa windows 8.1 aho, rehefa mampiasa ny Windows 10 Developer Preview amin'ny asako ...
Tongasoa ianao namana. Mendrika hosedraina :).
Louis dia hoy izy:
Distro tsara, hosedrainay amin'ny masinina virtoaly ny fomba fiasan'izy io.
Mamaly an'i louis
Moa ve i Fedora tonga miaraka amin'ny fitaovana tweak gnome? satria raha tsy izany dia amporisihiko izy 🙂
Ao amin'ilay torolàlana no misy ny fametrahana azy ...
Ao amin'ny bokiko dia misy ny fomba fametrahana ...
Bellon666 dia hoy izy:
Mametraka miaraka amin'ireo fanavaozana etsy ambony izy io. Misaotra tamin'ny lahatsoratra.
Valiny tamin'i Bellon666
Ny zava-dehibe indrindra ary voalohany indrindra dia ny fanesorana ny banga avy amin'ny genome ary hametahana birao mendrika toa ny KDE [/ troll]
Matotra (tsara, ny teo aloha koa dia somary matotra xD) misy toerana fitahirizana tena tsara ho an'i Fedora izay tsy dia voatonona firy nefa amiko dia tena ilaina izy ireo (ary ho an'ireo mametraka azy ireo dia heveriko fa ho toy izany koa)
hametraka ianao http://mirror.yandex.ru/fedora/russianfedora/russianfedora/free/fedora/russianfedora-free-release-stable.noarch.rpm
hametraka ianao http://mirror.yandex.ru/fedora/russianfedora/russianfedora/nonfree/fedora/russianfedora-nonfree-release-stable.noarch.rpm
Chromium, Skype, Opera, rar, flash, java 1.6 sy maro hafa. Saika tsy misy na inona na inona xD. Misaotra fa ity repo ity dia manome ny flash player, afaka atao ianao raha tsy misy ny adobe repo.
Postinstallerf: Repo misy rindrambaiko isan-karazany, indrindra fa multimedia, mpanova sns. Tena ilaina, ny bandy ato amin'ity tranonkala ity dia mitazona azy:
Azonao atao ny mametraka karazana ivon-rindrambaiko amin'ity:
mametaka postinstallerf ianao
Mahaliana ny mametraka programa sasany ary manao configurations sasany. Ny zavatra ratsy dia ity programa ity dia mametraka ny repo Dropbox fa raha tsy mampiasa Gnome ianao dia tsy liana ary choceo repo izay tsy liana koa satria efa manome an'io fonosana io ny Russianfedora. Mampiasako ny plugin ny hetsika fifamoivoizana aorian'izay hamafana ireo repo ireo isaky ny havaozina ny fampiharana.
Farany, somary hafahafa ity repo ity:
Rpm-sphere: Misy fonosana an'arivony izy io, ny zavatra ratsy dia tsy dia atokisana loatra izy io, misy fonosana apetrakao izy ireo ary tsy mandeha amin'ny fomba hafa na fonosana hafa tapaka izy ireo, nefa mendrika izany ho an'ny fonosana miasa ary be ny lohahevitra gtk sy kisary omeny. Nametraka motera chess vitsivitsy aho, ny interface graphique sopcast ary zavatra hafa. Manoro hevitra mafy ny fametrahana azy aho, tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana ianao no hahita zavatra ao anatiny ilainao.
Mbola tsy misy ny kinovan'ny repo ho an'ny Fedora 21. Na izany aza, hiasa ny repo ary azonao atao ny manova azy avy eo amin'ny alàlan'ny fanovana ny rakitra hanondroana an'i Fedora 21. Mavitrika ny repo, raha ny fanazavana, ny fanovana farany dia tamin'ny 1 Desambra .
lomano dia hoy izy:
petercheco, ... tsara toy inona ny rafitra teo amin'ny Fedora, ... manam-pahaizana amin'ny Linux sy rindrambaiko maimaimpoana ianao.
Raha ny tokony ho izy, rehefa nivoaka niaraka tamin'ny torolàlana faharoa momba ny fomba fanamboarana sy fanaingoana ny FreeBSD amin'ny Xfce sy Slim ianao?… .. arahabaona
Mamaly an'i nando
Lollipop, hoy izahay amin'ireo olona ireo.
Ho feo adaladala ianao ka tianao ny manompa olona tsy amin'antony.
Salama Nando ary misaotra betsaka. Amin'izao fotoana izao dia milalao amin'ny firewall aho ary manao zavatra adala amin'ny fonosana mpizara. Ho avy tsy ho ela ny lahatsoratra iray momba izany ary avy eo FreeBSD miaraka amin'i Gnome-shell izay mandany 230 megabytes Ram :).
Vctrsnts dia hoy izy:
Manantena ny ampahany faharoa amin'ny antontan-taratasy. Misaotra an'i peterchecho amin'ny tapany voalohany ...
Raha te hilaza aminao ny marina aho dia mieritreritra ny handao an'i Debian ary hifindra any amin'ny FreeBSD, efa nanandrana izany nandritra ny taona maro, fa ankehitriny miaraka amin'ny fanovana ny pkg, mahazo aina kokoa amiko.
Na dia ny hany mampiadana ahy aza (satria nanamarina aho fa manana ny programa ilaiko rehetra) dia ny fomba fanaovana Wi-Fi. Amin'izao fotoana izao ao amin'ny GNU / Linux, misy ny wicd, saingy hitako fa tsy ampitaina amin'ny FreeBSD izy ary izaho miaraka amin'ilay solosaina findainy mifandray amin'ny wifis hafa, satria mahita zana-kazo kely aho hanovana ireo rakitra ifandraisana (heveriko fa rc.conf sy wpa). Voavaha ve ity olana ity? Raha tianao ny mampiasa wifi ...
Misaotra amin'ny zavatra rehetra…
Mamaly an'i Vctrsnts
Manoro hevitra anao aho hanandrana wifimgr hitantanana ny vadinao.
pkg mametraka wifimgr
Voavaha ny olana.
Satria manonona ny FreeBSD ianao, tsara raha manana torolàlana feno amin'ny fametrahana gnome, satria nandona ny tenako tamin'io fametrahana io aho ary tsy nisy na inona na inona tonga tamin'ny tontolon'ny sary tamim-pilaminana 😐
SlimTelmex dia hoy izy:
Tena mpangataka Peter tsara !!!
Araka ny filazan'ny manam-pahaizana GNU / Linux nando 🙂
Izahay dia mila ny torolàlana faharoa hanatsarana ny FreeBSD xfce azafady, efa tiako ho toy ny Fedora izany, miaraka amin'ireo sary manaitra azy.
Valiny amin'ny SlimTelmex
Ampidino ireto fonosana ireto:
Maka azy ireo ianao ary mamorona lahatahiry roa ao an-tranonao. Iray misy anarana .icons ary iray manana anarana .tema
Ao amin'ny lahatahiry .icons dia apetaho ny boriborintany faribolana Numix sy Numix
Ao amin'ny folder .tema dia apetaho ny folder Numix (GTK)
Misafidy ireo lohahevitra fotsiny ianao ao amin'ny fikirana XFCE.
Hitako fa tena ilaina tokoa ho an'ireo superfans an'ity distro ity. Tsara foana ny mahita ny fomba fandrosoan'ny rindrambaiko, na maimaim-poana kokoa na latsaka malalaka.
Maniry aho: antenaiko fa ho an'ny kinova Fedora manaraka dia hivoaka ny pc izay manana safidy hametraka azy io mialoha, satria ny rindrambaiko maimaim-poana dia zavatra maro, fa ambonin'izy rehetra dia manana faharesen-dahatra aho fa maro karazana, zavatra iray. izay tsy ananany, ary manome ahy izay tsy hanana izany mihitsy aho, rindrambaiko manana. Hery iray izay ananan'i Fedora – tahaka ny hafa– isaky ny dingana asehon'izy ireo
Valiny tamin'i Arazal
fantaro fa Red Hat beta-tester ianao ary misafidy ny hametraka GNU / Linux hafa izay tsy kasain'ny orinasa tsy miankina.
Miarahaba anao avy any atsimo.
PS: Tsy zakako izany, miala tsiny amin'ireo "geeks mora tohina."
pamp dia hoy izy:
Atsaharo ny miteny adala. Fedora ihany no mamolavola sy manohana rindrambaiko maimaimpoana ary raha tsy fantatrao hoe inona izany, azoko tsara ny hevitrao. Samy mahazo tombony amin'ny asan'ity fizarana ity i Red Hat sy ianao, izay manavao hatrany.
Mamaly an'i pamp
Manohana rindrambaiko maimaimpoana ny Pamp fa miaraka amin'ny firmware tsy misy maimaim-poana, izany no tsy ampidirina ao amin'ny fsf distros
andao avela ny ekstremista, ny microsoft sy ny orinasa maro hafa sns niara-niasa tamin'ny fampandrosoana linux, tsy hampiasa linux ve izy ireo mba tsy ho beta tester an'ireo?
ianpock dia mitovy ihany ny zavatra mitranga amin'ny ubuntu na ny fsf aza dia nitsikera ny ubuntu mihoatra ny Fedora. milaza fa manana rindrambaiko mpitsikilo avy amin'ny amazona izy ary raha avoaka io dia tsy maimaim-poana
ry zalahy a, bandy a ... tsy misy ekstremisma na lainga eto. Fanontaniana iray izay AZONAO AOKA, araka izay azo atao sy tsapany fa ny vondrona orinasa (miaraka amin'ny filàn'izy ireo manokana) dia mitantana ny fironana, ny sary ary ny fivoaran'ny rafitra fiasa izay mety ho eo amin'ny solosainao. Fedora dia mahafeno ireo tanjona ireo ho an'ny Red Hat. Toy izany koa i Centos.
Ireo distros hafa izay manolo-tena amin'ny fampandrosoana orinasa dia misy an'i Suse sy Ubuntu.
PS: mila manazava ve aho fa tsy ny an'ny orinasa ny tombontsoan'ny mpampiasa?
manasa ati-doha !!
... Mandritra ny 10 pesos fanampiny dia apetrantsika ny «conditioner», noho izany manana lohany mahay sy mpandraharaha izy!
Nefa fantaro fa rindrambaiko maimaimpoana io ary azonao atao ny mihazakazaka, manova, mandalina ary mizara azy.
Ao amin'ny sehatry ny matihanina dia samy nanohana rindrambaiko maimaimpoana ny Fedora sy i Red Hat ary na i Suse aza tombony azo avy amin'izany.
daryo ny valiny 18. Tsy mahery fihetsika aho (mahery fihetsika fotsiny aho amin'ny tsy fampiasana systemd, any raha manaiky anao aho) araka ny hitanao fa novaliako taminao tamin'ny Ubuntu (Lubuntu tokoa io). Izaho ihany no miteny azy io satria maro no milaza fa 100% Free Software izy io ary manana firmware tsy maimaim-poana. Ary mihoatra lavitra noho ny Ubuntu mahazatra. Azoko atao ny manamarina izany aminao satria ny distora Fedora / centos / stella isaky ny nampiasako azy ireo dia niasa tsara tamiko ny wifi nefa tsy nametraka mpamily (manana ny b4318) aho fa amin'ny Ubuntu eny.
PS: Heveriko fa tsy misy spyware-spyware ny lubuntu.
Tsy mampiditra fonosana tsy misy vidiny sy mifandraika amin'ny patanty. Azonao atao ny manamarina ny làlan'ny rindrambaiko maimaimpoana ary hentitra be izy ireo.
Ny hany zavatra tsy maimaim-poana dia ny firmware.
Fa ny tiako holazaina dia hoe manao asa be ho an'ny fiarahamonina izy. Amin'ny famolavolana rindrambaiko maimaim-poana, mahazo tombony ny rehetra, tsy ny Red Hat ihany. Ka veloma amin'ny fitsarana an-tendrony. Satria misaotra an'i Fedora dia nohatsaraina ny teknolojia maro.
Misaotra amin'ny torohevitra!
Efa manana Gnome 3.14 Antergos voalamina tsara aho. Ny maha samy Gnome 3.14 Misy mahalala ve ny sanda fanampiny ananan'ity Fedora 21 ity? Haingana ve izany? Aleo namboarina mialoha? Etc.
Ny hevitra rehetra dia nandoko azy "tsara!" fa tsy hitako izay tsy ananan'ny distro hafa 3.14 hafa ...
Manome ahy izany fa hametraka azy amin'ny partition hafa aho ary hiafara amin'ny rafitra roa mitovy 🙂
Ny tetik'asa Gnome dia vatsian'ny Red Hat betsaka ka ny fampidirana ny Gnome ao amin'ny Fedora dia tsara. Manoro hevitra anao aho mba andramo dia ho hitanao :).
Mario Garcia dia hoy izy:
Fandraisana anjara tena tsara 🙂
Valiny tamin'i Mario García
Misaotra anao :).
Rui Quaresma dia hoy izy:
Salama, tiako ny famaritana ny Fedora 21, raha vao napetraka, azo atao tsara ny manatsara ny karazana "fonts" (fontconfig-infinality). Amin'izao fotoana izao dia mampiasa openSUSE 13.2 aho miaraka amin'ity karazana fanatsarana endri-tsoratra izay tsy azon'i Fedora atao 21 misaotra manampy ianao misaotra
Valiny amin'i Rui Quaresma
Andramo Fedy, manana safidy hanatsarana ny fandikana endritsoratra (ankoatry ny zavatra maro hafa).
Tsy mbola manana ny repo ho an'ny F21 ianao nefa mandeha tsara.
Sokafy ny terminal ary midira ho faka. Araho ireto dingana ireto avy eo:
Apetaho ity atiny ity:
anarana = Infinality
afaka = 1
anarana = Infinality - noarch
Mitsitsia amin'ny CTRL + O ary farano amin'ny CTRL + X.
mametaka fontconfig-infinality ianao
ary vonona :).
derio dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, ny zavatra ratsy momba ny Fedora dia manana systemD, misy ny mpampiasa manana freebsd.
Mamaly an'i derio
Salama, tongava manampy misaotra anao vita araka izay voalaza etoana ary nandeha tsara izany, ankehitriny dia manana loharanom-baovao Fedora 21 manana kalitao lehibe aho. Misaotra anao noho ny fahafahanao manana ary manome fanampiana an'ireo izay maniry ny endritsoratra Fedora 21 manana kalitao tsara jerena eto voalaza eto. Misaotra anao.
Tsisy fisaorana :).
Alask dia hoy izy:
Peter, iza no tsara kokoa Fedora 21 na CentOS 7?
Valiny tamin'i Alask
Raha ny hevitro dia tsara kokoa ny CentOS 7, saingy akaiky ny Fedora 21 Workstation ary manana rindrambaiko maro sy Gnome 3.14:)…
Inona no fizarana Linux ampiasainao, inona araka ny eritreritrao no tsara indrindra hanatanterahana asa amin'ny karazany rehetra?
Inona no fizarana linux ampiasainao? Iza amin'ireo no hitanao fa tsara indrindra hanao ny zava-drehetra?
Andao hojerentsika Alask, nijanona niaraka tamin'ny FreeBSD 10.1 tamin'ny mpizara aho ary teo amin'ny birao sy ny solosaina findainy dia mitazona distro marin-toerana aho miaraka amin'ny fanohanan'ny CentOS 7. Tena distro misy fonosana marobe izy ary miaraka amin'ny repo EPEL dia tsy misy na inona na inona izany. Etsy ankilany manana fanohanana 10 taona ianao.
dudukx dia hoy izy:
Avy any CRUNCHBANG aho, nampiasa an'ity fizarana ity nandritra ny 3 taona, reraka aho ary nifindra tany amin'ny Fedora ... hatreto dia tena tsara. Manantena aho fa afaka mihalalina.
Mamaly an'i sitx
"Inona no hatao aorian'ny fametrahana ny Fedora" ???? toy ny mahazatra hatrany, esory izany.
Isaka akanjo dia hoy izy:
Tena tsara ny hafatrao, nametraka F21 fotsiny aho, haha ​​ny marina, tsy maintsy miaiky aho (araka ny hitako tamin'ny lahatsoratra hafa teto) fa "distr-jummper" aho nanandrana [U / X / K / L] buntu, Debian, Mint, fanabeazana fototra, sns sns izay tsy tadidiko intsony, ny marina dia toa haingana be tamiko ny fametrahana F21, ary mora ihany (somary misavoritaka ihany tamin'ny fotoana fizarazaran-tanana satria mitazona fizara miaraka aminay aho. W8.1). Ny tena marina dia malefaka kokoa noho ny Ubuntu-GNOME aho ary ny masiniko dia VAIO VGN-N350FE efa antitra sy azo itokisana (Intel Core Duo CPU T2350 @ 1.867GHz, 2GB RAM, 120GB HD [IDE]) ary ny marina dia izy dia ny distro izay mampiseho ny fampisehoana tsara indrindra (miaraka amin'ny fanabeazana fototra), ny hany tombony ananan'ny fanabeazana fototra amin'ny solosainako dia ny fanabeazana fototra ahy ihany no alefan'ny solosainako nefa tsy mifandray, fa efa antitra ary ny marina tsy maharitra ela loatra ka tsy maninona fa tsy maintsy ampifandraisina foana. Manantena aho fa manohy manome ny atiny momba ny F21 ianao. Fiarahabana avy any Coahuila, Mexico
Valiny tamin'i Isaac Robles
Misaotra betsaka ary faly aho 😀
Salama Peter, raha vantany vao nifindra tany amin'ny Fedora 21 aho, dia talanjona tamin'ny fametrahana azy; hatramin'ny nametrahako ireo mpamily Ati-tany.
Vao manavao aho, fa manana fanontaniana aho, ny repositories rpmfusion dia manana kinova 2: famoahana 21 ary famoahana stable. Iza no atoro anao?
Manontany aho, satria hitako fa mbola tsy nohavaozina elaela ny tranon'omby.
Niova aho satria mitady rafitra marin-toerana sy ankehitriny, saingy afaka manao fanavaozana aho mandritra ny volana maro ary tsy manapotika ilay rafitra.
Mametraka ny kinova mifandraika amin'ny kinovan'ny distro foana aho, koa mamporisika anao hampiasa ny kinova 21 maimaim-poana sy 21 tsy andoavam-bola.
Miarahaba namana 😀
Miarahaba an'i Peter.
Nesoriko fotsiny ny Fedora, tsy tiako izany efa eo amin'ny birao izany, nanome olana be dia be tamiko: Repositories miadana, tsy mametraka tsara izy ireo, mihidy ny Firefox, hitako ireo mpamily Ati-tany (fglrx) tsy voalamina.
Ao amin'ny Arch aho izao, fa izao kosa dia mila distric Ciclyc, reraky ny miady amin'ny rafitra aho.
Nieritreritra an'i Ubuntu aho (fa manandrana manamaivana ny Unity) na Lmint miaraka amin'ny kanelina, fa ny hitako dia ny olan'ny Fanatsarana avy amin'ny dikanteny iray hafa: 12.04 ka hatramin'ny 14.04.
Miarahaba 😀 ary mirary fety sambatra (14 feb).
Hafahafa izany Kikin satria tsy manana olana amin'ny Fedora sy Gnome-shell aho ... Ho an'ny hafainganan'ny trano fitahirizana dia misy plugin ...
mametaka yum-plugin-fastmirror ianao
Ary ahoana ny amin'ireo mpamily tompona Ati ... Mametraka mpamily maimaimpoana foana i Fedora ary tsy mametraka an'izay tompony ho azy mihitsy ... Ho an'ireo mpamily tompona trano dia mila manao dingana vitsivitsy ianao:
Eny, nieritreritra aho fa niaraka tamin'ireo mpamily maimaimpoana, tena nametraka ireo maimaim-poana aho, noho izany dia nanova azy ireo aho, saingy, tsy tiako izany.
Eny, nampiasa ny "fastmirror" hafa koa aho sns ... Saingy nisy fiatraikany ratsy tamiko.
Raha ny amiko dia napetraka ny kinova Xfce, satria zavatra maivana no tadiaviko. Raha tsy mahomby amiko i Arch (izay azo atao indrindra), dia homeko fotoana iray indray i Fedora ary Ubuntu amin'ny manaraka. Efa vonona ny fametrahana Usb ho an'ny tsirairay 😀
Eny, homeko fotoana vaovao Slackware ao amin'ny kinova 14.2, izay efa ho karamelina: D ... Fa maninona? Nosoratan'i KDE 5, XFCE 4.12, LXQT ary ny:
Izay efa misy 14.1 fa amin'ny 14.2 dia hampidirina ao amin'ny distro ... Ary veloma amin'ny famahana ny fiankinan-doha amin'ny tanana amin'ny Slackware ...: D.
Tsia, tsy liana amin'ny fanandramana intsony aho. Fantatro fa milamina tokoa ny Slackware, saingy tsy dia miverimberina loatra izany ary raha misy ny zavatra mitranga dia tsy dia misy antontan-taratasy firy momba izany; ka handeha ho any Ubuntu aho izao, farafaharatsiny fantatro fa ny firaisana tokana no hany afaka manafintohina ahy. Fa hiezaka ny hanazava azy aho.
AleQwerty dia hoy izy:
Rahoviana no navotsotra ny SlackWare 14.2? Mitebiteby aho ... 😉
Mamaly an'i AleQwerty
Salama @AleQwerty, raha ny fantatro dia amin'ny faran'ny volana martsa na amin'ny fiandohan'ny volana aprily:)…
@ kik1n Ny hany homen'i Ubuntu anao miaraka amin'ny Unity dia ho boka amin'ireo fonosana avy amin'ny sampana fitiliana / tsy marin-toerana an'i Debian ... Saika tsara kokoa ny mijanona ao amin'ny Arch noho ny mampiasa Ubuntu: D.
Eny, hitako, natsipiko ny tontolon'ny sary manandrana manamaivana ny firaisankina.
Hiezaka ny hijanona eo amin'ny arisara aho mandra-piverin'ny fitiavako an'i oSUSE.
Ok, misaotra @petercheco hitandrina aho 😉
Misaotra betsaka fa nandray ny olana mba hanamorana ny zava-baovao ho antsika. Vaovao amin'ny Fedora aho ary efa hanandrana izany. Taorian'ny fametrahana dia natomboko tamin'ny toro-hevitrao fa ny wget dia tsy mandeha amiko ... na izany aza dia mandeha toy izao:
su -c 'dnf mametraka –nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm'
Inona no azoko tamin'ny tranokala hafa, azonao atao ve ny manazava amiko ny antony?
miarahaba ary misaotra betsaka !!!
Salama ary misaotra betsaka amin'ny fandokafana :). Miaraka amin'ny wget izay ataonao dia misintona ilay fonosana ary avy eo dia tsy maintsy apetrakao amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa azy na amin'ny alàlan'ny fanatanterahana anao hametraka rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm && yum apetraho rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
Ny nataonao dia ny misintona sy mametraka miaraka amin'izay ny fampiasana programa Fedora (DNF) vaovao izay manolo ny YUM taloha.
Nicolas Rincon dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, arahaba, jereo, efa vitako daholo ny fametrahana lahatsoratra tao amin'ny Fedora 21, ary manana olana aho rehefa mametraka rindrambaiko avy amin'ny foibe rindrambaiko, tsy ny rindranasa rehetra akory no manana ny bokotra apetraka, fony izy ireo mbola tsy nanao, ary rehefa manandrana manao mametraka rindrambaiko apetrako ny root pass ary milaza amiko izy fa nisy lesoka tamin'ny fisintomana, afaka manampy ahy ianao. Misaotra anao
Valiny tamin'i Nicolas Rincon
Salama, ny foibe rindrambaiko Fedora dia manana olana hafahafa ary izany dia tsy miasa afa-tsy amin'ny repo ifotony fa tsy amin'ny repo toa ny rpmfusion, sns ... Manoro anao aho hametraka yumex izay tsy misy olana.
Ho an'i Fedora 21 sy taloha:
mametaka yumex ianao
Ho an'i Fedora 22 ary taty aoriana:
dnf mametraka yumex-dnf
solis.sob dia hoy izy:
Fandraisana anjara tena tsara, ankasitrahana
Arahaba avy any Lonquimay, Araucanía, Chile
Valio amin'ny solis.sob
jorvas dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, fa ahoana no hametrahako ny rindranasa toa ny mpilalao haino aman-jery, ny birao, ny «burner» ary ny «browser» tsy misy Internet amin'ny Fedora 21?
Mamaly an'i jorvas
Raha tsy misy Internet dia mila mamorona repository eo an-toerana ianao amin'ny dvd feno:
Navoaka i Tanglu 2.0 "Bartholomea"
Ahoana ny fomba hahitanao ireo fifandraisana voafafa ao amin'ny Gmail